Launcher ကိုတိုက်ရိုက် Icons Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » launcher တိုက်ရိုက် Icons
launcher တိုက်ရိုက် Icons APK ကို
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအသကျရှငျအပေါ် app ကို icon များစေမည်ကြောင်းတည်းသော launcher!
"NO!" ပြောပါသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်း, utilities, ချက်ချင်းတမန်တို့ကိုနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက် icon များ boring ပါ! အဆိုပါကာတွန်း Modes သာမဆို Set: app ကို, အဆက်မပြတ်ကာတွန်းအိုင်ကွန်သို့မဟုတ်မ icon.Currently ကာတွန်းကားအတွင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုများအတွက်ကာတွန်းထောက်ခံ:
•က Settings App ကိုအိုင်ကွန်;
• Chrome ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
• Skype ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
•ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ဖုန်းက App icon ကို;
• SMS ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
• Facebook မှာ App ကိုအိုင်ကွန်;
• Faceboook Messenger ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
• WhatsApp ကိုအိုင်ကွန်;
• Pokemon Go ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
• YouTube ကိုဂီတ App ကိုအိုင်ကွန်;
• Gmail ကို App ကိုအိုင်ကွန်;
• Google App icon ကို Play;
• AliExpress App ကိုအိုင်ကွန်
• Google ဂီတ App ကိုအိုင်ကွန်
• Google Maps ကို App ကိုအိုင်ကွန်
• Wi-Fi Navigator App ကိုအိုင်ကွန်
•ပြက္ခဒိန် App ကိုအိုင်ကွန်
•နာရီ App ကိုအိုင်ကွန်
• Viber ကို App ကိုအိုင်ကွန်
• Vkontakte App ကိုအိုင်ကွန်
•ကို eBay က App icon ကို
• PayPal က App ကိုအိုင်ကွန်
• Pinterest App ကိုအိုင်ကွန်
• Snapchat က App icon ကို
• Spotify App ကိုအိုင်ကွန်
•တွစ်တာက App icon ကို
• Uber App ကိုအိုင်ကွန်
•ကြေးနန်း App ကိုအိုင်ကွန်
•ပျင်းရိ App ကိုအိုင်ကွန်
•က Wi-Fi ကို App ကိုအိုင်ကွန်
•အင်တာနက်က App ကိုအိုင်ကွန်
• Candy Crush Saga က App icon ကို
• Zombies App ကိုအိုင်ကွန် vs. အပင်
လျှောက်လွှာများနှင့်ဂိမ်း icon တွေကိုယခုအမှန်တကယ်အသက်ရှင်ရကြ၏ !!!!
launcher နထေိုငျ (ကာတွန်း) icon တွေကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ဝေါလ်ပေပါထက်အေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အမှန်ပင်အလွန်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သာ osmino ဖွင့်တင်ပေးမယ့်အစစ်အမှန်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုသင်အလွယ်တကူ, ထိုစာရင်းထဲတွင်မျက်နှာပြင်နှင့်သိုလှောင်မှုအာကာသကိုတက်စားဘက်ထရီလောင်ကြောင်းမိုးသည်းထန်စွာ Widgets တွေသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်အတူမြင်ကွင်းကိုဖြစ်ရပ်များအချို့ application ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းအပေါငျးတို့သဖန်သားပြင်တော့ဘူးပျင်းစရာငြိမ် icon များတစည်း, ဒါပေမယ့်သင်အကြိုက်ဆုံး apps များ '' ပုန်ကန်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ icon များအဘို့ကြီးစွာသောစစ်မြေပြင်နေကြသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုင်မဖော်ပြ။
Launcher ကို osmino မျှမလိုအပ်သော features တွေပါတဲ့ရိုးရှင်းပြီးအသုံး launcher ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ် tools တွေရှိပြီးကမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါရန်လွယ်ကူမယ့်အစာရှောင်ခြင်းပါပဲ။
ဒါက beta ကို launcher ဗားရှင်းနှင့်သင့်တုံ့ပြန်ချက်သည်နှင့်အကြံပြုချက်များ wellcome များမှာ! သူတို့ရဲ့ icon များလွန်းနေစေခြင်းငှါငါတို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံး app ကိုစာရင်းပေးပို့ဖို့သေချာပါစေသတည်း
အဆိုပါပင်မမျက်နှာပြင်၏ customization နဲ့ညှိနှိုင်းမှုဖိုလ်ဒါထဲမှာ app များကိုအုပ်စုဖွဲ့, မကြာခဏအသုံးပြုကြသည် applications များ၏ကာတွန်း: launcher သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဘို့, အဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများအတွက်စက်ကိရိယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပေါ်တွင် install လုပ် applications များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း။ နောက်ထပ်အင်ဖိုအတွက် http://osmino.com/agreementlauncher.html ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး
6.17 ကို MB
Rolling icon များ - ...